15 / 07 / 2021 16 / 07 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 308 Views စာ0မှတ်ချက် 30392 Hermione ရဲ့လေ့လာမှု Desk, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Hermione granger, Lego, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Polybag, အိတ်များ
အတွက်တရားဝင်ပုံများ ပိုးအိစံ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၃၀၃၉၂ Hermione ၏လေ့လာရေးရုံးကိုအရာရှိတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် Lego website.
အပြီးနောက် ပိုးအိစံ ခဲ့ ပထမဆုံးမြင်ခဲ့တယ် 'အစားထိုးအုတ်များ' ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွင်အစုံ၏ပုံရိပ်များအတွင်းရှိအရာပါ ၀ င်သောအရာများကိုယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ နာမည်မှမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ပိုးအိစံ ၏ eponymous ဇာတ်ကောင်တစ် minifigure မထည့်သွင်းရန် ဟယ်ရီပေါ်တာ.
အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ဟာ Hermione၊ အုတ်ပြားတွေတည်ဆောက်ထားတဲ့စားပွဲခုံ၊ စာအုပ်တစ်အုပ် (ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Hermione ဟာစာအုပ်မရှိရင်ဘယ်မှာလဲ)၊ စာအိတ်နှစ်လုံး၊ သင်သည်သင်၏စုဆောင်းမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်ရှာလျှင် Lego ချောကလက်ဖားကဒ်များလည်းပါ ၀ င်သည်။
ဇီးကွက်၏ပါဝင်မှုတစ်ခုထူးဆန်းတစ်ခုဖြစ်၏ သင် avid နေလျှင် ဟယ်ရီပေါ်တာ ခင်ဗျား Hermione ဟာဟယ်ဝစ် (Harry's Hedwig) ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ဇီးကွက်ထက်ငှားဖို့ပိုများတယ်၊ ဂျင်းဆံပင် Crookshanks ပုံစံနဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဖို့ပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလိမ့်မယ်။
အသေးစားရုပ်ပုံ Hermione သည်ဟယ်ရီ၏လည်ပင်းနှင့်ခြေထောက်များနှင့်တူညီသည် ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတူတူပင်ဇီးကွက်လည်းပုံပေါ်ဘယ်မှာ။
Hermione ၏လေ့လာရေးရုံးကို ၃၀၃၉၂ မည်သို့ရောင်းချမည်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းမနှစ်ကဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ပိုးအိစံ မှာလက်ဆောင်တစ်ခုနှင့်အတူ - ဝယ်ယူအဖြစ်ရရှိနိုင်ခဲ့သည် Lego စတိုးဆိုင်များ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီနှစ်အလားတူအခြေအနေမျိုးမြင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့မှတဆင့်အစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← ဓာတုအင်ဂျင်နီယာသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမိန့်ခွန်းများတွင်မယားစကားပြုလုပ်သော LEGO စက်ကိုအသုံးပြုသည်
LEGO သည်ဘယ်သောအခါမျှ ၇၅၃၀၄ D တွင်နေထိုင်မည်မဟုတ်ပါartဇ Vader သံခမောက်၏သေတ္တာ art →